‘अबको बिकल्प नयाँ राजनीतिक दल जन्मनु नै हो’ « Harekpal
‘अबको बिकल्प नयाँ राजनीतिक दल जन्मनु नै हो’
पुराना अहिलेका यि दलहरूबाट यो देश बन्दैन यसमा हामी सबै नेपाली जनता निश्चित भए हुन्छ। उदाहरणको लागि अहिलेको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटलाई अध्ययन गरे पुग्छ।
त्यहाँ यथेष्ट बजेट छ। इमान्दारी नियत हुने हो भने सार्बजनिक बिद्यालयहरू सुधार्न ६ महिना पनि लाग्दैन, स्थानीय अस्पताल सुधार्न, अस्पताललाई चौबीसै घण्टा सेवा दिने बनाउन, विशेषज्ञ सेवा दिन, एम्बुलेन्स २४ सै घन्टा उपलब्ध गराउन एक महिना पनि लाग्दैन, कम्तिमा ५ सय (स्थानीय तहमा) जनालाई स्वरोजगार बनाउन १ बर्ष पनि लाग्दैन तर यी सेवाहरु जस्ताको तस्तै हैन पहिले भन्दापनी अहिले झन झन खस्किदै गइरहेको सर्बबिधित नै छ।
बजेट नयाँ नयाँ भवन बनाउन (जहाँ कुनै आवस्यक नै छैन), नयाँ नयाँ सामाग्री खरिद गर्न, पदाधिकारी भत्ता, नयाँ नयाँ सवारी साधन किन्न, कर्मचारीलाई मोजमस्ती गर्न, कार्यालय खर्च आदिको लागि छ तर अत्यावश्यक सेवाको लागि बजेट छैन। भएको बजेट कहाँ खर्च हुदैछ भन्ने कुनै पनि सरकारी निकायबाट निगरानी छैन। यो मैले कसैलाई र कसैप्रति आरोप लगाएको होइन यो वास्तविकता हो । प्रमाणहरु तपाईं र हाम्रो वरिपरि नै प्रशस्त छन। नजिकैको बिद्यालय, अस्पताल र बिदेश जान बाध्य छिमेकीहरूलाई सोधे पुग्छ। अझ स्थानीय तहको कुरा गर्दा त यति व्यापक रूपमा भ्रष्टचार छ की हामीले कल्पना गर्न समेत सक्दैनौं ।
हरेक कुराको लागि पर्याप्त बजेट हुँदाहुदै पनि जनताका यि आवश्यकतालाई सुधार्न गर्न कस्ले दिएन, के ब्युरोक्रेटस (कर्मचारी)ले रोक्यो? रोकेन उहाँहरुलाई दोष दिन पाइन्न । उहाँहरुलाई बिगार्ने भनेका अहिलेका यि भ्रष्ट जनप्रतिनिधि नै हुन । किनकी उहाँहरुलाई नरिझाई कमिसन आउदैन, भ्रष्टाचार गर्न पाईदैन अनि त उहाँहरुले कसरी टेर्नुहुन्छ? यदि उहाँहरुबाट हुने भए अहिले हामी बिहान र बेलुका छाक टार्नको लागि घरपरिवार सबै छाडेर अर्काको देश जान पर्दैन थियो, जो कोही बिरामी हुँदा चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउदैन थियो। हरेक नेपाली जनताले आफ्ना छोराछोरी पढाउन नसकेर रुनु पर्दैन थियो। उहाँहरुबाट अब पनि सम्भावना खोज्नु भनेको सुन्तलाको बोटमा कागति फल्छ र खाउँला भनेर आश गर्नु मात्र हो।
राजनीतिबाट समाधान नखोज्ने हो भने त्यसपछिको एउटा बिकल्पको रुपमा राजालाई हेर्न सकिन्थ्यो तर उनी पनि फेल भैसकेका हुन । उनीबाट पनि हामी जनताका अपेक्षाहरु पूरा हुन सक्दैनन्। हुने भएको भए पहिला नै भैसक्थ्यो । उनले पनि केही बर्ष शासन गरेकै हुन ।
तार टागेर रेडि छ (बजेट), ठाउँ ठाउँमा सबवे स्टेसन छन् (बिद्यालय अस्पताल सरकारी भवनहरु), ट्रान्समिटर (भौतिक बस्तुहरु) पनि छन्, वायरिङ (चिकित्सक शिक्षकहरु र कर्मचारीहरु) पनि रेडी छन् तर करेन्ट (गुणस्तरीय) छैन। मात्रै करेन्ट(गुणस्तर) जोड्दिए पुग्छ त्यो जोडेर त्यसको नतिजा आउन एक बर्षपनी लाग्दैन। करेन्ट अहिले सट (राजनीतिक पेसागत सङ्गठनले गर्दा) भएर फ्युज उडेको छ त्यो फ्युज जोडे पुग्छ तर त्यो जोड्न पुराना दलले सक्दैनन् ।
किनकी फ्युज जोड्दा बित्तिकै उहाँहरुलाई नै करेन्ट लाग्छ। आफैलाई करेन्ट लाग्ने फ्युज उहाँहरुले कसरी जोड्न सक्नुहुन्छ र? सम्भव छैन।
अबको बिकल्प नयाँ राजनीतिक दल नै हो। अरु कुनै बिकल्पकै छैन, अबपनी हामीले यिनै भ्रष्ट पार्टीहरूलाई बिश्वास गर्ने होइन “जुन जोगि आएपनि कानै चिरेको“ भन्ने हो भने यो देश बन्दै बन्दैन भनेर छोड्नु हो, देशप्रती निरास हुनु हो, उनिहरुलाई नै जति लुट्ने हो लुट भनेर खुलेयाम छोड्ने हो तसर्थ आउनुहोस जुटांै यो देश समृद्ध बनाउन। त्यो नजिकै छिमेकमा ( चिन, भारत र पाकिस्तान) मा सम्भव भयो भने हामीकहाँ पनि गज्जबले हुन्छ। श्रोत साधन सबै छ फ्युज जोडेर करेन्ट प्रवाह गरे पुग्छ।